हाई टेक घरहरू
आधुनिक उच्चप्रविधिले नयाँ प्रविधिहरू र सामग्री प्रयोग गरी आरामदायक घर निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। जब एक देशको घर सजावट गर्दै, यो शैलीले सम्पूर्ण ढाँचाको सम्पूर्णतालाई पूर्ण रूपमा मान्दछ। यस्ता काल्पनिकहरू उनीहरूको नवीनता, असाधारण र साहसले आकर्षित हुन्छन्।
आधुनिक उच्च प्रविधिहरू
आधुनिक घरको वास्तुकलामा उच्च तकनीकको शैलीमा, प्रायः असामान्य ज्यामितीय आकारहरू, धेरै गिलास, धातु, अतुल्यका पर्खालहरू प्रयोग गरिन्छ। छत प्राय: एक सट्टा आकार छ, तर कहिलेकाहीँ सेट र ढलान कन्फिगरेसन। एक फ्ल्याट छत को सतह को आराम स्थान या खेल मैदान बाहिर को आयोजन को लागि प्रयोग गरिन्छ। कुटीरमा थुप्रै फर्श, आउटबलिल्डिंग्स, एक्वाइंग्स, हवेली हुन सक्छ। ठूला पानोरामिक सञ्झ्यालहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ, बाल्टिनहरू एक गैर-मानक आकार हुन सक्छ। बाहिरको घरको मुखमा, एक नियमको रूपमा हाइलाइट गरिएको छ। रातमा, यो कुटीर धेरै प्रभावकारी देखिन्छ।
गैर-मानक पेन्टागनल कोठाहरू, त्रिकोणीय क्यानोपियाहरूसँग परियोजनाहरू लोकप्रिय छन्। अक्सर, यस्ता घरहरू मिनी हरियोहाउस, सौर प्यानलहरू, वर्षा जल संग्रह र शुद्धीकरण प्रणालीहरूसँग सुसज्जित छन्। यस्तो आधुनिक भवनहरूले सबै अभिनव टेक्नोलोजीहरू लैजान खोज्छ - एक स्मार्ट घर प्रणाली, न्यानो फ्लोर, स्वायत्त बिजुली आपूर्ति। ग्लेजिंग को ठूलो क्षेत्रहरु को लागी आवेदन को कोटेज धेरै प्राकृतिक प्रकाश प्रदान गर्दछ। थर्मल इन्सुलेशनको लागि, अल्ट्रामोडर्न पोलिस्टियरिजहरू प्रयोग गरिन्छ।
यस्तो परियोजनाहरू महसुस गर्न महँगो हुन सक्छ, तर तिनीहरू थप शोषणको प्रक्रियामा अर्थपूर्ण छन्।
हाई-टेक शैलीमा घरको गृहमन्त्री
कोट भित्रको विशाल चमकिएको खाली ठाउँहरू द्वारा निस्किएको छ, नि: शुल्क आउट-आउट। अधिकतर प्रायः इन्टरनेटमा कम्तीमा आन्तरिक विभाजनहरू प्रयोग गर्दछ। लिङ्ग रूम डाइनिंग रूम संग जोडन सकिन्छ, यसबाट बाहिर दरवाजा स्लाइडिंग को साथ खुला छत को उपयोग छ।
घर नवीनतम प्रविधि संग सुसज्जित छ। विशाल कोठा सबै प्रकारका लैंपद्वारा उजागर भएको छ - केन्द्रीय असामान्य चैंसेलीहरू, खण्ड वा कोष्ठहरूमा लैंप, छत, निचिस वा फर्नीचर रोशनीमा बनाइन्छ।
फैशनेबल उच्च तकनीक शैली मा घर को इंटीरियर डिजाइन, सरल ज्यामितीय आकृतिहरु र सिधा लाइनहरु को उपयोग गरिन्छ, आधुनिक सामग्रियां - धातु, प्लास्टिक, ग्लास। तीव्र रूपमा चाँदीको धातु, सेतो, कालो, खैरो प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूलाई अन्य मोनोक्रोम रंगहरू थप्न सकिन्छ - रातो, पहेंलो, सलाद, नीलो, तर धेरै डिस गरिएको।
कोठा मा सजावट को पूर्ण कमी असामान्य आकार र विवरण को बनावट द्वारा क्षतिपूर्ति गरिन्छ। धेरै गिलास, धातु र चमकदार सतहहरु प्रकाश र प्रतिभा को खेल संग captivating छन्।
कोठा को डिजाइन मा धेरै चिंतित सतहहरु - टाइल्स, खिंचाव छत, चमकदार या ग्लास facades फर्नीचर, दर्पण, पारदर्शी तालिकाहरु, टुकडे टुकडे।
उच्च प्रविधिको इन्टरनेटमा फर्नीचर सानो छ, तर यो कार्यात्मक छ, यो स्पष्ट र ज्यामितीय आकार छ। सामग्रीको लागी गिलास संग संयोजन मा छाला, प्लास्टिक, गिलास, क्रोम भागहरु को लागी सामाग्री बाट। सामानहरू चमकदार हुनुपर्छ।
सजावटका लागि, तपाईं स्टाइलिश ढाँचा, एक दर्पण, तस्वीरमा केहि तस्बिरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सञ्झ्याल उद्घाटनमा पर्दा र परदेहरू हराइरहेको छ भने वांछित, पातलो गिलास वा ब्लाइन्डहरू प्रयोग गरिन्छ।
उच्च प्रविधी शैलीमा सुन्दर घरहरू तिनीहरूको मौलिकता, उत्पत्ति र अनुग्रहलाई आकर्षित गर्छन्। वास्तुकला र आधुनिक उपकरणको नवीनतम उपलब्धि संग लैजान, यो कुटीर पुरा तरिकाले हाई-टेक स्टाइलमा आधारित छ - उच्च प्रविधिहरु, यो आजको मानवता को सबै उपलब्धिहरू देखाउँदछ।
कर्क वाल प्यानलहरू
बाथरूममा डिजाइन टाइलहरू - रंगहरूको सबैभन्दा इष्टतम संयोजन र स्टाइलको तरिका
छतलाई कसरी ठीक तरिकाले घुमाउनुहुन्छ?
बाथरूम मा छत को लागी - कसरि एक अद्वितीय डिजाइन को चयन र बनाएँ?
आन्तरिक मा रातो रङ - एक चमकदार डिजाइन उच्चारण
भान्सा काउन्टर - कसरी सही छनौट गर्ने?
आफ्नो हातले देशमा तालाब
आफ्नै हातले भान्सा सजावट
फ्लोरिडा टाइलहरूको तह
लिविंग रूमको इन्टरनेटमा प्रान्त शैली
महिला स्कूटर नाइके 2016
ब्याक मांसपेशिहरु कसरी बलियो बनाउने?
कुकुरका लागि सुत्ने खाना
थाइरोइड हार्मोन - आदर्श
जेनिफर लोपेज एक लोकप्रिय भाषण शो मा समाचार साझा
Beyonce, आफ्नो पतिको अनुरोधमा, छाती लिफ्ट बनाइयो
मिति नम्बर जादू
प्रकृतिमा गर्भवती महिलाहरु मध्ये फोटोशूट
ब्लिटिङ - कारणहरू र उपचार
रेस्पेड हनी - राम्रो र खराब
न्यू यर्क शहरका बच्चाहरु संग पैदल मा लिभ टायलर र डेभ गार्डनर पापराराजी द्वारा देखिए
आकारमा जीन्स कसरी छनौट गर्ने?
जौ ध्रुव - लाभ
बच्चाहरु मा घुटने
वास्तवमा, अभिनेत्री एंजेलिना जोलीको तस्बिरहरू नि: शुल्क बिक्रीमा देखा पर्छन्
अरू कसैको कर्तव्य पूरा गर्न कसरी रोक्न?
25 अजीब र अपरिचित ब्रह्मांडीय घटना
महिला जैकेट - फैशनेबल छवियों को तस्वीरहरुको चयन सबै अवसरों को लागि